Madaxweynaha Philippines oo ka dhabeeyay hanjabaad uu horay ugu jeediyay Mareykanka – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Philippines oo ka dhabeeyay hanjabaad uu horay ugu jeediyay Mareykanka
Madaxweynaha dalka Philippines, Rodrigo Duterte ayaa horay ugu hanjabay in uu ka weecan doono xiriirka taariikhiga ah ee uu la lahaa Mareykanka, waxaana uu intaa raaciyay in uu la shaqeyn doono dowladda Shiinaha.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in arrintan ay saameyn doonto xiriirka soo jireenka ah ee labada dal.
Bishii lasoo dhaafay, madaxweynaha dalkaas, Rodrigo Duterte ayaa ka digay in uu kansali doono heshiiska dhanka amniga ee ay wada galeen Mareykanka, kadib markii Mareykanku uu dal ku galka u diiday dad ay saaxiibo yihiin Madaxweynaha.
Madaxweynaha aan gabanin ee dalkaas ayaa dhowr jeer ka hadlay mustaqbalka heshiisyada ay dalkiisa wada galeen Mareykanka, tan iyo markii uu awoodda yimid sanadkii 2016-kii.
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysay in ay ballaariso saldhigga ciidan ee ay ku leedahay dalka Philipines Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalkaas ayaa horay u sheegay in xukuumadda Washington ay halkaas ka dhisi doonto garoomo militeri, guryo iyo xarumo ciidan.
Puntland oo ka hor-timid sharcigii uu saxiixay Farmaajo una digtay shirkado caalami ah
Xaflad sagootin ah oo Muqdisho loogu sameeyay Isimadii ka kala socday Puntland iyo DDS